मजदूर नचिन्ने कस्ताे सरकार, कस्ता कम्युनिष्ट ?
५ बैशाख २०७७, शुक्रबार ०७:५८
नेपालमा कम्युनिष्टहरुको जनमत २ तिहाइभन्दा बढी छ। कम्युनिष्ट पार्टीको लोकप्रिय सरकार छ। हिजोका मजदूर संगठनका नेतामध्ये कोही बालुवाटारका हर्ताकर्ता छन्, कोही मन्त्री छन्, कोही प्रदेश मन्त्री र सांसद छन्, कोही राजनीतिक नियुक्ति र उच्चपदस्थ राजकीय जिम्मेवारीमा छन्। यति बेला उनीहरुको कुरा सुनिन्छ। उनीहरुले चाहे क्षणभरमा हर कुनै निर्णय हुन्छ। एकातिर त्यस्ता नेता छन्, अर्कोतिर यो सरकार नै कम्युनिष्टहरुको छ।
कम्युनिष्टहरुको विश्वव्यापी नारा छ, ‘संसारका मजदूर एक होऔं।’ यही नाराको लोकप्रियताले नागरिकलाई तानेकै कारण नेकपाका नेताहरु सत्तामा छन्। नेताहरुकाे दावी छ, ‘संविधानले समाजवाद भनिसक्यो। नेपालमा हामीले मौलिक प्रकृतिको समाजवादको जग हाल्दैछौं। अबको दशक समाजवादी क्रान्तिको दशक हुनेछ।’ तर, सरकार र कम्युनिष्ट पार्टीको छाँटछन्द हेर्दा समाजवादको तयारी त के, गन्धसमेत भेट्न मुस्किल पर्छ।
विश्व कोभिड–१९ को महामारीमा छ। नेपाल करीब एक महिना अघिदेखि लकडाउनमा छ। हजाराैं मजदूरहरु सडकपेटीमा रात बिताएका छन्। लाखौं नेपालीहरु काँधमा बच्चा, हातमा पोकापुन्तुरो बोकेर काठमाडौंदेखि बाजुरा हिँडेका छन्, ताप्लेजुङ हिँडेका छन्। कति त लहान पुगिसके। डोल्पा हिँडेकाहरु कति अहिले नौबीसेको ओरालोमा होलान्। तर, अहँ ! न वामपन्थी सरकार बोल्छ, न कम्युनिष्ट पार्टी बोल्छ, न बालुवाटार र शक्तिकेन्द्रमा बिराजमान मजदूरका नेता।
हिजो कम्युनिष्ट पार्टी सत्ताबाहिर थियो। सत्ता प्राप्तिको बलियो भर्‍याङ थिए मजदूर र किसान। अब सत्ता प्राप्तिको लडाइँ सकिएको छ। नेताहरुकै भाषामा ‘यो त समृद्धिको लडाइँ हो।’ समृद्धिको लडाइँले नेताहरु नराम्रोसँग दुर्गन्धित भएका छन्। अहिले उनीहरुको वर्ग फेरिएको छ। मार्क्सवाद, समाजवाद र साम्यवादको परिभाषा र व्याख्या पनि फेरिएको छ। यसले उनीहरुको सोच्ने तरीका पनि फेरिदिएको महामारीले प्रष्टै झल्काउँछ।
गाउँ–गाउँमा भएका सिंहहरु पनि ‘रेञ्जरकै कार्यशैली’ देखाइरहेका छन्। मान्छेलाई आज चामलको खाँचो छ। तर, उनीहरु तीन पुस्ते अभिलेख फाराम बनाएर बसेका छन्, मानौं कि विज्ञबाहेक अरुले त्यो भर्नै सक्दैन। अझ कति मेयरले त फाराममा घरभेटीको सही, लालपूर्जा पनि मागेका छन्। जुन फाराम रितपूर्वक भरिसक्दा मजदूरको हालत ससुराली हिँडेको दुलाहाकै जस्तो हुन्छ।
लकडाउनका बेला २२ मन्त्रीले गर्नुपर्ने प्रमूख काम
कोभिड–१९ पछि को बन्ला विश्व महाशक्ति ?